आज माघ २८ गते मंगलबारको राशिफलः भगवानले मंगल गरून्
आज २०७६ माघ २८ गते मंगलबार । हेरौ आजको राशिफल : मेष परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा अझ राम्रो हुनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । अध्ययनमा प्रगति हुनेछ । लगनशीलताले संकल्प पूरा गर्न सकिनेछ। मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ । शुभचिन्तकहरूको साथ प्राप्त.....
धनी हुने मन छ ? आजै यस्तो नराम्रो बानी त्याग्नुहोस्
समाजमा असल शासनमार्फत राम्रा कुराहरुको अनुशरण गर्न तथा नराम्रा कुराहरुलाई परिमार्जित गर्दै असल बन्नका लागि शास्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका बहन गर्दछ । शास्त्रका अनुसार हामी साना साना नराम्रा कुराको सिकार बनेका हुन्छौं । जसले गर्दा हामीलाई धनि बन्न दिँदैन । यस्ता नराम्रा बानीलाई त्याग्दा धनि बन्न सकिन्छ: त्याग्नैपर्ने.....
साप्ताहिक राशिफलः माघ २६ गते आइतबार देखि फागुन ३ गते शनिबारसम्म
२०७६ माघ २६ देखि फागुन ३ गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल मेष– अध्ययनमा राम्रो प्रगति हुनेछ । सन्तानबाट सुख मिल्ने एवं व्यापार व्यवसाय फस्टाउनेछ । धार्मिक यात्राको अवसर मिल्नेछ । स्वास्थ्यमा सुधार आउने एवं महिला वर्गबाट सहयोग मिल्नेछ । वैदेशिक कामबाट फाइदा एवं सरकारी क्षेत्रमा पहुँच बढ्नेछ । साताको अन्त्यमा.....
माघ २७ गते सोमबारको राशिफलः महादेवले मंगल गरून्
२०७६ साल माघ २६ गते आइतबार मेषः– समय सुधारोन्मुख देखिन्छ । काम गर्दा इज्जत प्रतिष्ठाको ख्याल राखेर गर्नु होला । आफ्ना काम भन्दा अरुका काम बढि हुनेछन् तर काम गरेर जश कम मिल्नेछ । लाभदायक यात्राको सम्भावना देखिन्छ । अरुको भरमा मात्रै काम नगर्नु होला । व्यापार व्यवसायमा खासै प्रगति हुने देखिन्न । स्वास्थ्यमा.....
घरको साज–सज्जामा धेरै जना सौखिन हुन्छन् । अझ घरका विभिन्न कोठामा विभिन्न तरिकाबाट सजाउनु मानिसको सौख नै हुन्छ । जसमा मानिसहरु ठूला–ठूला तस्बिर तथा चित्रकला ल्याएर राख्ने गर्छन् । तर सबै तस्बिर घर वा कोठमा सजाउन योग्य नहुन पनि सक्छन् । कुनै–कुनै तस्बिरले मानिसमा सकारात्मक उर्जा पैदा गराउँछ भने कुनै तस्बिरले.....
मानिसले राम्रै पैसा कमाए पनि बचत नहुने, खर्च बढ्ने साझा समस्या हुन्छ । यस्तो हुनुमा ज्योतिष शास्त्रले केही धार्मिक कारण रहेको बताउँछ । शास्त्रअनुसार पर्समा पैसाबाहेक अनावश्यक कागजपत्र राख्नु हुँदैन । अधिकांश मानिसले पर्समा पैसाका अलाव अरु केही कागजात समेत राख्ने गरेका हुन्छन् । ज्योतिषशास्त्र अनुसार.....
आज माघ २३ गते बिहीबारको राशिफलः भगवानले मंगल गरून्
आज मिति २०७६ साल माघ महिनाको २३ गते बिहीबार, तदअनुसार सन् २०२० फेब्रुअरी ६ तारिख, हेर्नुहोस आजको राशिफल मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) व्यावसायिक काममा खर्च बढ्नेछ । अरूका काममा महत्वपूर्ण समय बित्न सक्छ । समयमा काम पूरा नहुनाले खिन्नता बढ्ला। सेवामूलक कामबाट प्रतिष्ठा मिल्ने समय छ । बृष ( इ, उ, ए, ओ, बा,.....
बौद्ध धर्म होइन ‘धम्म’ हो : के अंतर छ धर्म र धम्ममा ?
केही मान्छेहरु तर्क दिन्छन् धर्म र धम्ममा भाषाको फरक मात्र हो । धर्म नेपाली भाषामा हो र पाली भाषामा धर्मलाई धम्म भनिन्छ । यो बिषयलाई प्रस्ट पार्न बुद्ध धम्मका विद्वान् डा. भिम राव अंबेडकर, जसलाई बोधिसत्वको उपाधी प्रधान गरिएको छ, को चर्चा गर्नु बान्छनीय हुन आउँछ । डा. अंबेडकरले बुद्धिस्टहरुको महत्त्वपूर्ण.....
द्रौपदीले किन बनाइन् पाँच पति ?
महाभारतकी मुख्य पात्र द्रौपदी पाँच पति भएको कारण सधै विवादमा रहिरहिन् । बहु श्रीमती राख्ने समजमा बहुपति राख्दा अस्विकार गर्ने समाजसँग द्रौपदीले क्रान्ति नै गर्नुपरेको थियो । अर्जुनसँग विवाह गरेकी द्रौपदीको सम्बन्ध अर्जुनको अरु भाइहरुसँग सम्बन्ध बढ्दै गयो । द्रौपदी अर्जुनलाई मात्र प्रेम गर्थिन्.....
भगवान राम र कृष्ण किन भए निला ?
धेरै मानिसहरुको मनमा भगवान श्रीरामचन्द्र र श्रीकृष्णको रुप किन निलो भन्ने प्रश्न जाग्ने गर्छ । भगवान श्रीकृष्ण जन्मदा गोरो नै जन्मिनुभएको थियो । यमुनामा रहेका कालिनागको विषको प्रभावले उहाँको छालाको रंग निलो भएको बताइन्छ । भगवान श्रीरामचन्द्र कसरी निलो ? तपाई हेर्नुहोस आकाशको रंग निलो छ । समुन्द्रको.....